The Ab Presents Nepal » मोडल वाच
जब्बर नायिका हुन्, नम्रता श्रेष्ठ । अनेक आरोह-अवरोह छिचोल्दै आएकी उनी यतिबेला आफ्नो लयमा फर्किएकी छिन् । जतिबेला उनी रजटपटमा पाइला राख्दै थिइन्, त्यसबेला नै नम्रतालाई एक संभावनाको रुपमा हेरिएको थियो । तर, उनको अभिनय यात्रा एकनास रहेन । यसबीचमा उनले लामो विश्राम लिइन् । विश्रामपछि उनी अभिनयमा फर्किएकी छिन्.....
नेपाली नायिकाहरुको हाट & बोल्ड लुक्स आउने क्रम जारी फेरी, बाहिरियो सुष्मा आधिकारीको यस्तो बोल्ड लुक्स फोटो फिचर !
गाेरखा- पछिल्लो समय नेपालि नायिका एव मोडलहरुको बोल्ड लुक्स सार्वाजानिक हुने ‘ट्रेन’ जस्तै चलेको छ । यहि मेसोमा अर्की एक चर्चित नायिका सुष्मा अधिकारीले पनि हट फोटो सुट गराएकी छन् । पछिल्लो समय फिल्ममा खासै नदेखिएकी अधिकारीको नया प्रोजेक्टको गृहकार्यमा रहेको बताएकी छन् । तथापि म्युजिक भिडीयो लगायत.....
शुक्रबार बेलुकी राष्ट्रपति भवन शित्तल निवासमा आयोजना भएको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’मा नायिका बेनिशा हमालले चलचित्र ‘ब्लाइन्ड रक्स’बाट वि.सं २०७४ सालको उत्कृष्ट नायिकाको पुरस्कार जित्दै गर्दा चलचित्र ‘बुलबुल’बाट नायिका स्वस्तिमा खड्काले वि.सं २०७५ सालको उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड जितिन् । एकैसाथ.....
काठमाडौँ असार -: डान्सर तेरिया फौजा मगर अहिले १८ वर्ष पुगेर जवानी अवस्थामा छिन् । सानै उमेरमा नै नेपाल र भारतमा गरी दुई देशमा नाम र दाम कमाइसकेकी छिन् । उनले २०१४ मा भारतीय जी टिभीको ‘डीआईडी लिटिल मास्टर’ जितेकी थिइन् । त्यस लगत्तै उनले भारतीय सिनियर डान्स स्टार बिचको अर्को ठुलो नृत्य प्रतियोगिता जित्न.....
धान दिवसलाई विकृत बनाउँदै गोप्य अंगमा धानको बिउले छोपेर फोटो शुट गर्ने यी महिला पहिलोपटक मिडियामा…भिडियो कुराकानी
धान दिवसलाई एउटा बृकृति फैलाउने तरिकाले मोडल रीतिका जिरेलले आफ्नो फोटो शुट गरेकी हुन्। 'उनले धानको बिउले आफ्नो गोप्य अंग छोपर फोटो शुट गरेकी छिन।कतिपय चर्चामा आउन कै लागि भए पनि धान दिवसमा छोटा छोटा लुगा लगाएर फोटो शुट गर्ने गरेको पाइन्छ '। उक्त तस्बिरले भाबी सन्ततिमा नकारात्मक असर त' पर्ने र धान दिवसलाई.....
अडिसनमार्फत मुख्य नायिकाको आवेदन खुल्ला गरेको ‘प्रेमगीत–३’ युनिटले अन्ततः कृष्टिना गुरुङलाई छानेको छ। अडिसनकै लागि अमेरिकाबाट नेपाल आएकी कृष्टिनाले सहभागी २ हजार ७ सय १४ जना प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्दै चलचित्रमा काम गर्ने अवसर पाएको फिल्म युनिटको दाबी छ। फिल्मका निर्माता सन्तोष सेनका अनुसार २ हजार.....
नेपालि कलाकारिता जगतमा एक चिर परिचित नामा हाे आशा खड्का। हास्य बिधामा जस्तासुकै चरित्रलाइ पनि सहजै ढंगबाट निर्वाह गर्न पारंगत छन उनि । हर्के हल्दार देखि अन्य थुप्रै हास्यटेलिचलचित्रमा छाप छाेडिसकेकि आशा रिसानि माफ टेलिचलचित्रमा निकै नै रूचाइयकि अभिनेत्रि या भनाै पात्र हुन। बाल्यकाल देखिनै संर्घष.....
दुबईमा २० हजार फिट माथिबाट कुदिन् यी नायिका!
बलिउड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाले २० हजार फिटमाथि बाट कुदेपछि सामाजिक सञ्जालमा हट केक बनेकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनका तस्वीरहरु भाइरल भइरहेका छन् । जुन तस्वीर देखेर उनका फ्यानको होस उडेको छ । उर्वशी सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै अपडेट हुने नायिकामा पर्छिन् । इन्स्टाग्राममा उर्वशीले आफ्ना फ्यानका लागि.....
‘लभ डायरीज’मा सुशिलसँग रोमान्टिक रुबिना”
चलचित्र ‘लभ डायरीज’को निर्माण टिमले फस्टलुक पोष्टरसँगै प्रदर्शन मिति तय गरेको छ । चलचित्रको फस्टलुकमा नव–नायिका रुबिना थापासँग नायक सुशिल श्रेष्ठ देखिएका छन् । टपलेस सुशिलको छात्तीमा टाउको राख्दै रुबिना रोमान्टिक देखिएकी छिन् ।' सौरभ चौधरीले निर्देशन गरेको यो चलचित्र असोजको ३ गतेबाट रिलिज हुने भएको.....